Iza no Tena Mpivavaka Amin’Andriamanitra?
HAMAKY AMIN'NY TENY Abbey Abui Acholi Afrikaans Aja Akha Alemà Altaï Alur Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Ateso Attié Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bassa (Cameroun) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Biak Bichlamar Bicol Boulou Bété Cebuano Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chiga Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chin (Zotung) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Cinamwanga Cinghalais Cinyanja Damara Dangme Danoà Dayak Ngaju Douala Drehu Dusun Efik Espaniola Estonianina Failandey Fante Fidjianina Fon Frantsay Futuna (Atsinanana) Ga Galoà Gitonga Gokana Goun Grika Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Guéré Haoussa Herero Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Irlandey Isoko Italianina Javaney Jula Kabiyè Kabuverdianu Kachin Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabo) Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisii Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kpelle Kreôla Maorisianina Kreôla any Beliza Kreôla any Goadelopy Kreôla any Guyane Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kurde Kurmanji Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Lamba Lambya Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathe Mazahua Mbunda Mende Meru Mizo Mongol Mooré Myama Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nengone Ngabere Ngangela Nias Norvezianina Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Odia Okpé Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Pendjabi (Shahmukhi) Pidgin (Afrika Andrefana) Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rarotonga Romanianina Ronga Rosianina Runyankore Rutoro Rômania (Gresy Atsimo) Rômania (Gresy Avaratra) Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Rômania (Serbia) Rômania (Slovakia Atsinanana) Samoanina Sangir Sango Sena Sepedi Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Soedoà Soundanais Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Talian Tamoul Tandroy Tankarana Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Malezianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Myama Tenin’ny Tanana Népali Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Tailandey Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Tuvalu Twi Umbundu Urhobo Uruund Vezo Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wichi Wolaita Yacouba Zandé Zoloa Éwé
1. Iza ihany no mahalala ny fomba hanompoana an’Andriamanitra?
BETSAKA ny fivavahana milaza hoe mampianatra ny marina momba an’Andriamanitra. Tsy afaka ny ho marina daholo anefa izy ireny, satria tsy mitovy ny zavatra ampianariny. Raha manontany ianao hoe iza Andriamanitra ary ahoana no tokony hivavahana aminy, dia samihafa ny valiny ho azonao. I Jehovah irery no mahalala hoe ahoana no tokony hatao rehefa hanompo azy.
2. Inona no tokony hatao raha te hahalala ny marina?
2 Nomen’i Jehovah antsika ny Baiboly mba ho fantatsika izay tokony hatao rehefa hivavaka aminy. Ianaro tsara àry ny Baiboly. Hahasoa anao ny zavatra ianaranao ao satria tena tia anao i Jehovah.—Isaia 48:17.
3. Inona no tian’Andriamanitra hataontsika?
3 Misy milaza fa tian’Andriamanitra daholo ny fivavahana. Tsy izany anefa no nampianarin’i Jesosy. Hoy izy: “Tsy izay rehetra milaza amiko hoe: ‘Tompo ô, Tompo ô’, no hiditra ao amin’ny fanjakan’ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon’ny Raiko.” Tokony hofantarintsika sy hataontsika àry ny sitrapon’Andriamanitra. Tena ilaina izany satria nilaza i Jesosy hoe hoatran’ny “mpandika lalàna”, na olon-dratsy, izay tsy mankatò an’Andriamanitra.—Matio 7:21-23.
4. Mora ve ny manao ny sitrapon’Andriamanitra, araka ny tenin’i Jesosy?
4 Nilaza i Jesosy fa tsy voatery hoe mora foana ny manao ny sitrapon’Andriamanitra. Hoy izy: “Midira amin’ny vavahady tery. Fa lehibe sady malalaka ny lalana mankany amin’ny fandringanana, ka maro no miditra any. Tery kosa ny vavahady ary ety ny lalana mankany amin’ny fiainana, ka vitsy no mahita azy.” (Matio 7:13, 14) Ilay lalana tery dia ny fivavahana tian’Andriamanitra, ka hiaina mandrakizay izay mankany. Ilay lalana malalaka kosa dia ny fivavahana tsy tiany, ka ho ringana izay mankany. Tsy tian’i Jehovah hisy ho faty anefa ny olona ka avelany hianatra momba azy daholo.—2 Petera 3:9.
5. Inona no hamantarana ny tena mpivavaka?
5 Nilaza i Jesosy fa azo fantarina ny tena mpivavaka amin’Andriamanitra. Ny zavatra inoan’izy ireo sy ny zavatra ataony no amantarana azy. Hoy i Jesosy: “Ny voa izay vokariny no hahafantaranareo tsara azy ireny.” Nilaza koa izy hoe: “Ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara.” (Matio 7:16, 17) Miezaka manao ny tsara foana ny tena mpivavaka amin’Andriamanitra na dia tsy lavorary aza. Andao hojerentsika hoe ahoana no hamantarana azy ireo.
6, 7. Tokony ho avy aiza ny zavatra ampianarin’ny tena mpivavaka? Inona no nataon’i Jesosy?
6 Mampianatra an’izay lazain’ny Baiboly. Hoy ny 2 Timoty 3:16, 17: “Ny Soratra Masina iray manontolo dia avy amin’ny herin’ny fanahy masin’Andriamanitra, ary mahasoa mba hampianarana, hananarana, hanitsiana izay diso, hanafaizana araka ny fahamarinana, mba hahatonga ny olon’Andriamanitra ho tena mahay sy ho ampy fitaovana tsara ho amin’ny asa tsara rehetra.” Hoy koa ny apostoly Paoly tamin’ny Kristianina: “Rehefa nandray ny tenin’Andriamanitra renareo avy taminay ianareo, dia tsy noraisinareo ho tenin’olona izany fa araka ny tena izy, dia tenin’Andriamanitra.” (1 Tesalonianina 2:13) Izay ao amin’ny Tenin’Andriamanitra, na ny Baiboly, ihany no ampianarin’ny tena mpivavaka, fa tsy izay lazain’ny olona na izay efa nahazatra hatramin’izay fotsiny.
7 Izay ao amin’ny Tenin’Andriamanitra ihany no nampianarin’i Jesosy. (Vakio ny Jaona 17:17.) Matetika izy no nanonona andinin-teny. (Matio 4:4, 7, 10) Manao hoatran’i Jesosy ny tena mpivavaka, ka izay lazain’ny Baiboly ihany no ampianariny.
8. Inona koa no tokony hataon’ny tena mpivavaka?
8 Mivavaka amin’i Jehovah irery. Hoy ny Salamo 83:18: “Ianao irery ihany, izay manana anarana hoe Jehovah, no Avo Indrindra ambonin’ny tany manontolo.” Nampianarin’i Jesosy ny olona hoe iza no tena Andriamanitra ary iza no anarany. (Vakio ny Jaona 17:6.) Hoy i Jesosy: “I Jehovah Andriamanitrao no tsy maintsy iankohofanao, ary ho azy irery ihany no tsy maintsy anaovanao fanompoana masina.” (Matio 4:10) Manao hoatran’i Jesosy ny tena mpivavaka, ka i Jehovah irery ihany no ivavahany. Mampiasa ny anaran’i Jehovah izy ireo, ary mitory momba ny anarany sy izay hataony.
9, 10. Inona no ataontsika mba hampisehoana hoe mifankatia?
9 Tena mifankatia. Nasain’i Jesosy nifankatia ny mpianany. (Vakio ny Jaona 13:35.) Tokony hifankatia hoatran’ny mpiray tam-po daholo isika na avy aiza na avy aiza, ary na mahantra na manankarena. (Kolosianina 3:14) Tsy mandeha miady àry isika na mamono olona. Hoy ny Baiboly: “Izao no ahitana miharihary izay zanak’Andriamanitra sy izay zanaky ny Devoly: Izay rehetra tsy manao ny marina dia tsy avy amin’Andriamanitra. Toy izany koa izay tsy tia ny rahalahiny.” Izao koa no voalaza ao: “Tokony hifankatia isika, fa tsy toa an’i Kaina, izay avy tamin’ilay ratsy ka namono tamin-kabibiana ny rahalahiny.”—1 Jaona 3:10-12; 4:20, 21.
10 Mifanampy sy mifampahery isika, ka mahafoy fotoana sy hery ary vola ho an’ny namantsika. (Hebreo 10:24, 25) Miezaka isika mba “hanao soa amin’ny rehetra.”—Galatianina 6:10.
11. Nahoana isika no tokony hino fa i Jesosy ihany no ahazoantsika famonjena?
11 Mino hoe i Jesosy ihany no ahazoantsika famonjena. Hoy ny Baiboly: “Tsy misy olon-kafa hahazoana famonjena, satria tsy misy anarana hafa ambanin’ny lanitra nomena ny olona hahazoantsika famonjena.” (Asan’ny Apostoly 4:12) Hitantsika tao amin’ny Toko faha-5 fa i Jesosy no nirahin’i Jehovah, mba hanavotana ny olona mankatò. (Matio 20:28) Izy koa no nofidin’i Jehovah ho mpanjakan’ny tany manontolo. Izay no mahatonga ny Baiboly hilaza fa tokony hankatò an’i Jesosy isika raha te hiaina mandrakizay.—Vakio ny Jaona 3:36.
12. Nahoana isika no tsy manao politika?
12 Tsy manao politika. Tsy niditra tamin’ny politika i Jesosy. Hoy izy tamin’i Pilato, mpitondra romanina: “Tsy anisan’ity tontolo ity ny fanjakako.” (Vakio ny Jaona 18:36.) Hoatran’i Jesosy ihany isika, ka manohana an’ilay Fanjakan’Andriamanitra any an-danitra foana. Tsy manao politika mihitsy isika, na aiza na aiza misy antsika. Asaina mankatò “ny manam-pahefana” anefa isika. (Romanina 13:1) Manara-dalàna foana isika. Raha mifanohitra amin’ny lalàn’Andriamanitra anefa ny lalàna ao amin’ny tanintsika, dia manao hoatran’ny apostoly isika hoe: “Andriamanitra no mpitondra anay ka izy no tsy maintsy ankatoavinay, fa tsy olona.”—Asan’ny Apostoly 5:29; Marka 12:17.
13. Inona no torintsika amin’ny olona?
13 Mitory hoe ny Fanjakan’Andriamanitra ihany no hanafoana ny olana eto an-tany. Nilaza i Jesosy fa hotorina maneran-tany ny “vaovao tsaran’ilay fanjakana.” (Vakio ny Matio 24:14.) Tsy hahavita ny vitan’ny Fanjakan’Andriamanitra mihitsy ny fanjakan’olombelona. (Salamo 146:3) Nasain’i Jesosy nivavaka momba an’io Fanjakan’Andriamanitra io isika hoe: “Ho tonga anie ny fanjakanao! Hatao etỳ an-tany anie ny sitraponao, tahaka ny any an-danitra!” (Matio 6:10) Milaza ny Baiboly fa handrava ny fanjakan’olombelona rehetra ilay Fanjakan’Andriamanitra, fa “izy kosa haharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra.”—Daniela 2:44.
14. Iza no tena mpivavaka amin’Andriamanitra, araka ny hevitrao?
14 Eritrereto àry izao: ‘Iza no mampianatra an’izay lazain’ny Baiboly? Iza no mitory momba ny anaran’Andriamanitra? Iza no tena mifankatia? Iza no mino hoe i Jesosy no nirahin’Andriamanitra, mba hamonjena antsika? Iza no tsy manao politika? Iza no mitory hoe ny Fanjakan’Andriamanitra ihany no hanafoana ny olana rehetra eto an-tany?’ Ny Vavolombelon’i Jehovah irery.—Isaia 43:10-12.
15. Inona no tsy maintsy ataontsika, ankoatra ny hoe mino an’Andriamanitra?
15 Tsy ampy ny mino fa misy Andriamanitra. Na ny demonia aza mantsy mino an’izany fa tsy mankatò azy. (Jakoba 2:19) Raha tiantsika heken’Andriamanitra ny fanompoantsika azy, dia tsy maintsy ataontsika koa izay asainy atao.
16. Nahoana isika no mila miala amin’ny fivavahan-diso?
16 Mila miala amin’ny fivavahan-diso isika, raha tiantsika heken’Andriamanitra ny fanompoantsika. Hoy i Isaia mpaminany: “Mivoaha avy ao aminy, ary aoka hadio ianareo.” (Isaia 52:11; 2 Korintianina 6:17) Na inona na inona àry avy amin’ny fivavahan-diso, dia tsy ataontsika.
17, 18. Inona no atao hoe “Babylona Lehibe”? Nahoana isika no mila miala ao haingana?
17 Diso ny fivavahana iray raha mifanohitra amin’izay lazain’ny Baiboly ny zavatra ampianariny momba an’Andriamanitra. Antsoin’ny Baiboly hoe “Babylona Lehibe” ny fivavahan-diso rehetra. (Apokalypsy 17:5) Betsaka amin’ny zavatra ampianarin’ny fivavahan-diso mantsy no nanomboka tany Babylona, taorian’ny Safodrano tamin’ny andron’i Noa. Lasa niparitaka eran-tany ireny fampianarana ireny. Maro tamin’ny andriamanitra nivavahan’ny olona tany Babylona, ohatra, no miaraka anankitelo. Betsaka koa izao ny fivavahana mampianatra hoe telo izay iray Andriamanitra. Milaza anefa ny Baiboly hoe iray ihany ny tena Andriamanitra, dia i Jehovah, fa Zanany kosa i Jesosy. (Jaona 17:3) Nino ny olona tany Babylona fa mbola velona ny fanahin’ny olona maty, ary mety hijaly any amin’ny afobe. Tsy marina anefa izany.—Jereo ny Fanamarihana 14 sy 17 ary 18.
18 Efa nilaza i Jehovah hoe kely sisa dia horinganina daholo ny fivavahan-diso. (Apokalypsy 18:8) Izay no mahatonga an’i Jehovah handidy hoe mila miala ao haingana isika, dieny mbola tsy tara loatra.—Apokalypsy 18:4.
Hanana fianakaviana eran-tany ianao raha manompo an’i Jehovah
19. Inona no hataon’i Jehovah raha manompo azy ianao?
19 Mety tsy ho azon’ny havanao sy ny namanao hoe maninona ianao no miala any amin’ny fivavahan-diso sy manompo an’i Jehovah. Mety hampijaly anao mihitsy aza izy ireo. Hanampy anao foana anefa i Jehovah. Hanana fianakaviana be dia be tena tia anao koa ianao eran-tany, ary ho afaka hiaina mandrakizay ao amin’ny tontolo vaovao. (Marka 10:28-30) Sady iza no mahalala raha mba hianatra Baiboly ihany ireny olona manohitra anao ireny?
20. Nahoana isika no tsy tokony hangataka andro fa hanaraka ny fivavahana tian’i Jehovah?
20 Kely sisa dia hofoanan’i Jehovah daholo ny zavatra ratsy, ary ny Fanjakany no hanjaka eran-tany. (2 Petera 3:9, 13) Hahafinaritra be ny fiainana amin’izay! Hivavaka amin’i Jehovah araka ny itiavany azy ny olona rehetra. Aza mangataka andro àry fa araho ilay fivavahana tian’i Jehovah!
NY TENA MPIVAVAKA DIA...
mivavaka amin’i Jehovah irery, ary mampahafantatra ny anarany
mino hoe i Jesosy ihany no ahazoantsika famonjena
mitory hoe ny Fanjakan’Andriamanitra ihany no hanafoana ny olana eto an-tany
HEVITRA 1: AHOANA NO HAMANTARANA NY FIVAVAHANA MARINA?
‘Tery ny vavahady ary ety ny lalana mankany amin’ny fiainana, ka vitsy no mahita azy.’—Matio 7:14
Tian’Andriamanitra daholo ve ny fivavahana?
Tsy ny fivavahana rehetra no tiany satria tsy izy rehetra no manao ny sitrapony.
Hiaina mandrakizay izay manaraka ny fivavahana marina, fa haringana mandrakizay izay any amin’ny fivavahan-diso.
Izay ataon’ny mpivavaka ao aminy no amantarana ny fivavahana marina. Tsy voatery hitety ny fivavahana rehetra ianao, fa ianaro fotsiny izay lazain’ny Baiboly.
HEVITRA 2: INONA NO ATAON’NY TENA MPIVAVAKA?
Mino sy mampianatra an’izay lazain’ny Baiboly.
Mivavaka amin’i Jehovah sy mampiasa ny anarany.
Mankatò an’i Jesosy satria izy no ampiasain’i Jehovah mba hamonjena antsika.
Tsy manao politika.
Mampianatra hoe ny Fanjakan’Andriamanitra ihany no hanafoana ny olana rehetra.
HEVITRA 3: MILA MINO SY MAMPIHATRA AN’IZAY NIANARANAO IANAO
Tsy maintsy manao inona ianao raha tianao heken’Andriamanitra ny fanompoanao azy?
Tsy ampy ny mino an’Andriamanitra. Mila manaraka an’izay lazainy ao amin’ny Baiboly koa ianao.
Mampianatra zavatra tsy eken’Andriamanitra ny fivavahan-diso na “Babylona Lehibe”, anisan’izany ny hoe telo izay iray Andriamanitra, tsy mety maty ny fanahy, ary misy ny afobe.
Kely sisa dia haringan’i Jehovah ny fivavahan-diso rehetra. Na inona na inona àry avy amin’ny fivavahan-diso, dia tsy ataontsika.
Hanampy anao foana i Jehovah na dia misy manohitra aza ianao.